Todoba talo oo ku aaddan sida loo xallin karo muranka ka dhashay ciidamada la geeyey Eritrea | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Todoba talo oo ku aaddan sida loo xallin karo muranka ka dhashay...
Todoba talo oo ku aaddan sida loo xallin karo muranka ka dhashay ciidamada la geeyey Eritrea
MOGADISHU, SOMALIA - NOVEMBER 28: Newly graduated Somalian soldiers display their skills at the graduation ceremony after receiving training period from Turkish military training academy, Somali Turkish Task Force Command, in Mogadishu, Somalia on November 28, 2019. Newly graduate 363 Somalian soldiers took their diplomas. (Photo by Sadak Mohamed/Anadolu Agency via Getty Images)
(Hadalsame) 12 Juun 2021 – Waxaa soo jeedinayaa talooyinkaan hoose, si loo xalliyo xasaradda ka taagan ciidanka la sheegay in loo qaaday Eritrea ee kaddibna la geliyey Dagaalkii Gobolka Tigraay, waloow ay DF beenisey arrintaasi:
1. In Eritrea loo kaxeyn doono guddi XAQIIQA RAADIN AH oo ay dhibbanayaasha iska soo doorteen, iyo xubno ka tirsan maamulka Bulshada Rayidka ee abaabulan SONSA, BUNSA & JUNSA, Qareenada ugu caansan xuquuqul insaanka, iyo wariyaasha madaxa bannaan.
2. Wafdigaas XAQIIQA RAADINTA oo xukuumadda ay hoggaamiso safar ugu yaraan 4 ilaa 7 maalmood ahna kuso kormeera xerooyinkii Eritrea ee tababarka loo geeyey dhalinyaradaa maqan.
3. Wafdigaas XAQIIQA RAADISKA ah waxay so xaqiijin doonaan liisaska dadka tababarka ku jira, inta nool, inta dhimatay, daryeelka inta xanuunsan, wararka ka soo tabin doona goobahaas. Ogaada, xaaladdan oo kale kolka ay dhacdo, dadku kuma qancayaan khudbado ay xukuumaddu ka akhriso idaacadda Qaranka. Wax intaa ka badan bay u baahan tahay ee madaxdu waa inay garowsataa.
4. Ugu dambeynna, GUDDIGAAS XAQIIQA RAADISKA ah kolka ay soo noqdaan waxay shirar jaraaid ku qabanayaan Muqdisho iyo caasimadaha maamul goboleedyada ayadoo lala kulmaya dhammaan qoysadka cabanaya, siinaya warbixin buuxda, iyo caddeyn goorta dalka lagu soo celin ardadaas tababarka ku maqan (hadday suurta gasho). Waana sida keliya ay dawladdu isaga beri yeeli karto dacaayadahaa fiday, laguna aamini karo, kalsoonidana lagu soo celiyo.
5. Taladeydaas dawladu haday ka dhabeyso xalku waa dhowaaday, haddii kale tuhunku wuu sii mataaneyn, xantuna wey sii kordhi, natiijada ka dhalatana inaan la mahdin doonin bay u badan tahay.
6. Ogaada dadku waxay ku qancaan runta iyo in la tuso oo la taabsiiyo, haddiiba khalad dhacayna laga markhaati furo, laga cudurdaarto, lagana caddaalad falo, kadibna boogaha ka dhashay la dhayo. Wixii intaas ka duwan waa TOO LATE, cid rumeysanna ma jiri doonto.
قوله تعالى: ” كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين “
7. Dalkaan xaaladdisa waxay u baahan tahay DEJIN, KA RUN SHEEGID, ISKAASHI MUCAARAD IYO MUXAAFAD, dawladdana laga yareeyo eedeynta. Haseyeeshee, dawladu waa in ay ogaato in arintaan aan lagu xallin karin khudbado lagu celceliyo iyo aftahannimo ee ay u baahan tahay qoysaskaa tirada badan ee wada ooyaya in la tuso oo la tasbsiiyo run ay ku qanci karaan oon ka duwan khudbadahaa Wasiir Dubbe ku celceliyo. Ilaa hadda, dawladdu haday xalkii haleeli weyday, waxaa habboon inay la tashato khubaro ehel u ah arintaan, horena loo socdo.
Qore: Prof. Xuseen Macalim Iimaan
Previous articleGOOGOOSKA: Italy vs Turkey 3-0 (Talyaani oo Turkey ku taagsaday)
Next article”Huawei cayriya marka hore!” – Imaaraadka oo looga baxay ballantii keentay inay Israel la heshiiyaan (Tibxo cusub)